Iska hor’imaad Saaka mar kale ka dhacay Magaalada Kismaayo. | POHSOMEV.COM
Iska hor’imaad Saaka mar kale ka dhacay Magaalada Kismaayo.
posted by admin on Tue, 06/17/2014 - 15:32
Kismaayo (Sh M Network)Wararka aanu ka heleyno Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose ayaa ku soo warramaya in saaka iska hor’imaad xoogan uu ku dhexmaray Labo Maleeshiyo Beeleed oo walaalo ah oo ku wada sugan Magaalada Kismaayo.
Iska hor’imaadka ayaa ka dhacay xaafadda Calaleey ee Magaalada Kismaayo iyadoo lagu soo warramayo in iska hor’imaadkaasi uu ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah balse illaa iyo haatan lama oga xaddiga khasaarahaasi.
Dhinaca kale waxaa saaka go’an Isgaarsiintii Magaalada Kismaayo iyadoo ay adagtahay in halkaas si fudud warbixinno looga helo.
Iska hor’imaadka saaka ka dhacay Kismaayo ayaa daba socda kii shalay ee u dhexeeyay Maleeshiyada ka wada tirsan Maamulka Magaaladaasi ka arrimiya ee Jubba oo ciidamadiisa qaab qabiil ay ugu kala jabeen halkaasi.